दुखी जोडीमा कस्ता विशेषताहरू हुन्छन्? बेजिया
दुखी जोडीमा कस्ता विशेषताहरू हुन्छन्?
मारिया जोस रोल्डन | 10/05/2022 22:12 | सम्बन्ध
त्यहाँ मानहरूको एक श्रृंखला हो जुन कुनै पनि सम्बन्धमा हराउन सकिँदैन: माया, सम्मान वा विश्वास। यी सबै मानहरूले दम्पतीलाई खुशी र समयको साथमा रहन मद्दत गर्नेछ। यसको विपरित, सम्बन्धको दुखाइ धेरै हदसम्म जोडीलाई सँगै बस्नको लागि आउने कठिनाइहरू र माथि देखिएका केही मूल्यहरूको कमीको कारण हो।
दुर्भाग्यवश, आज धेरै जोडीहरू दुखी छन् र उनीहरूले सिर्जना गरेको बन्धनको आनन्द लिँदैनन्। निम्न लेखमा हामी तपाईलाई दुखी सम्बन्धमा हुने लक्षणहरू देखाउँछौं र यो अवस्थाबाट बच्न के गर्नुपर्छ।
एक दुखी सम्बन्ध को विशेषताहरु
त्यहाँ धेरै विशेषताहरू छन् जसले दुखी सम्बन्ध पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ:
यो एक सम्बन्ध हो जसमा दुबै पक्षको मागको स्तर धेरै उच्च छ। प्रत्येकले अर्कोलाई दम्पतीको व्यक्तिगत विचारलाई ध्यान नदिई सधैं आफ्नो मापदण्ड अनुसार कार्य गर्ने अपेक्षा गर्दछ। यी सबैले छलफल र द्वन्द्वलाई जन्म दिन्छ जसले दम्पतीको राम्रो भविष्यलाई कुनै फाइदा गर्दैन।
मागको नतिजा दम्पती भित्र अवस्थित थोरै सहिष्णुता हो। पार्टीहरू बीच झगडा निम्त्याउने निश्चित त्रुटिहरूलाई अनुमति छैन। थोरै सहिष्णुताले अपमान र अयोग्यतालाई दिनको क्रम बनाउँछ र सम्बन्ध भित्र दुखी पूर्ण रूपमा स्थापित छ।
मनको अवस्थालाई औचित्य ठहराउनको लागि अपराधको प्रयोग भनेको धेरै जसो दुखी जोडीहरूको विशेषता हो। आफ्नो भावनात्मक स्वास्थ्यको लागि साझेदारलाई सधैं दोष दिन सकिँदैन। यी सबैले सम्बन्धमा धेरै समस्या ल्याउनेछ र त्यो सहअस्तित्व सबै पक्षहरूमा साँच्चै जटिल हुन्छ।
एक दुखी जोडी एक टोली होइन र विभिन्न समस्यालाई संयुक्त रुपमा समाधान गर्न सकिरहेको छैन। सुखी सम्बन्धमा, प्रत्येकको विचारलाई ध्यानमा राखेर, चीजहरू निष्पक्ष रूपमा गरिन्छ र योजना बनाइन्छ। दुवै पक्ष एउटै दिशामा लड्नुपर्छ र एकअर्कालाई संयुक्त रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ।
दुखी सम्बन्धमा, पक्षहरू सबै कुराको बारेमा बहस गर्छन् र दुई मध्ये कुन सही छ भनेर हेर्न। यो कुनै पनि परिस्थितिमा अनुमति दिन सकिँदैन र यो सबै भन्दा राम्रो सम्भावित समाधान खोज्न प्रश्नमा समस्या पर्दाफास गर्न सल्लाह दिइन्छ। रिस उठाउनु वा आफ्नो पार्टनरसँग झगडा सुरु गर्नु बेकार छ, किनकि यसले मात्र चीजहरू अझ खराब बनाउनेछ।
छोटो, एक निश्चित जोडीलाई सधैं खुसी राख्न सजिलो छैन। आफ्नो पार्टनरसँग बस्नुले चीजहरू जटिल बनाउँछ र समस्याहरू नियमित रूपमा उत्पन्न हुन सक्छ। प्रायजसो दुखी हुने सम्बन्धलाई कायम राख्नु उचित हुँदैन किनभने यो त्यस्तो चीज हो जसले कुनै पनि पक्षलाई फाइदा गर्दैन। खुशी भनेको कुनै पनि दम्पतीमा स्वस्थ मानिने कुरा हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मनोविज्ञान र जोडी » सम्बन्ध » दुखी जोडीमा कस्ता विशेषताहरू हुन्छन्?
कृत्रिम मिठाईको स्वास्थ्य जोखिम